Madaxweyne Xasan oo la kulmay wakiilka AU u qaabilsan Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo la kulmay wakiilka AU u qaabilsan Somalia
A warsame 18 October 2014 20 October 2014
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya danjire Maman Sidikou.
Xasan Sheekh Maxamuud iyo Danjire Maman Sidikou waxay ka wada hadleen arrimaha ammaanka iyo dar dargelinta howlgallada ka dhanka ah kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab, iyadoo uu kulankaasi goob joog ka ahaa Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Wakiilka gaarka ah Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo Wasiirka arrimaha dibadda oo kulanka kaddib, warbaahinta si wada jir ah ula hadlay ayaa ka warbixiyay qodobada ugu muhiimsan ee kulanka looga hadlay, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Wasiirka Arrimaha dibedda iyo dhiirigelinta maalgeshiga mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
“Waxaan halkaan nala jooga Safiirka Midowga Afrika u joogaya Soomaaliya, waxa uu badalayaa safiirkii hore ee Annadif sida aad ogtihiin shalay ayuu na soo gaaray maanta ayuu Madaxweynaha la kulmay waxa ay ka wada hadleen amniga, howlgalka socda iyo sida loo amba qaadi lahaa howlgallada lagu baacsanayo argagixisada, aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa Wakiilka cusub” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha dibadda.
Danjire Maman Sidikou oo isna halkaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay kulanka uu la qaatay Madaxweynaha Soomaaliya, maadaama uu maanta bilaabay shaqada loo igmaday, waxaana uu intaa ku daray in Soomaaliya ay xilligan ku talaabsatay horumar dhinac waliba leh.
“Soomaaliya oo xasilooni iyo nabad waarta ka dhalata, waxa ay ka dhigantay in Qaaradda Afrika oo dhan ay gaartay nabad buuxdo, waxaana diyaar u nahay in aan xoojino taageerada aan siineyno Soomaaliya, waxaana ammaan u jeedinaya dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya lagu sameeyay, si ay u hantaan guud ahaan amniga dalka” ayuu yiri Danjire Maman Sidikou.
AU oo dhistay guddi baara kufsiga lagu eedeeyey AMISOM
Falkii 3-aad oo naxdin oo muddo 5 maalmood ah laga maqlay Muqdisho